चार मन्त्रीका तीन थरि ड्रेसअपः कोहिको दौरा सुरुवाल, कोहिको ज्वारीकोटमाथि मफलर ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more चार मन्त्रीका तीन थरि ड्रेसअपः कोहिको दौरा सुरुवाल, कोहिको ज्वारीकोटमाथि मफलर !
काठमाडौं । आजै चार जना मन्त्रीको सपथ हुने सूचना बिहान बाहिरिएको थियो । शुरुमा सरकारलाई आजै पूर्णता दिने बिषयमा छलफल भएको थियो । तर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारमा आउन सकरात्मक भएपछि सरकारले आजै पूर्णता पाउने बिषय एकाएक गायब भयो । चार बजे सपथ कार्यक्रमको सूचना आयो, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छलफलमा थिए ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा आज माओवादीबाट दुइ र एमालेबाट दुइ गरि चार जना मन्त्री थपिएका छन् । एमालेबाट इश्वर पोखरेल (रक्षा) र डा. युवराज खतिवडा (अर्थ) अनि माओवादीबाट रामबहादुर थापा (गृह) र मात्रिका यादव (उद्योग) मन्त्री भएका छन् । यसअघि ओलीले एमालेबाट लालबाबु पण्डित (जनसंख्या) र थममाया थापा (महिला) मन्त्रीमा नियुक्ति भइसकेका छन् । १८ मन्त्रालय रहने केन्द्रीय सरकारमा अहिलेसम्म ६ जना मन्त्री नियुक्ति भइसकेका छन् ।
आजको सपथ कार्यक्रममा एमालेबाट मन्त्री हुने पोखरेल र खतिवडा दौरा सुरुवालमा थिए । त्यसोत एमालेकै प्रधानमन्त्री ओली पनि दौरा सुरुवाल र कालो टोपिएमा सजिएका थिए । माओवादीबाट मन्त्री हुने थापा भने कालो कोट, पाइन्ट र कालै टोपीमा थिए । चार मन्त्रीमध्ये यादवमात्रै फरक पोसाकमा थिए । उनले कोट लगाएका थिए तर ज्वारीकोटमा थिए । उनी त सेतो रंगमा कलेजी बुट्टा वाला मफलरमा सेतै चस्मा लगाएर सपथमा गएका थिए, सर्टमाथि ज्वारीकोट लगाएर, न त उनको टाउकोमा टोपी नै थियो । कतिपयले यादवको ड्रेसअप अाफ्नै समुदायको पहिचान भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा सरकार बिस्तार, चार मन्त्रीले गरे सपथग्रहण
फागुन १४ गते, २०७४ - १७:४१ मा प्रकाशित